”Waxaa soo baxay 3 qolo oo ka qayb qaata burburinta Diinta Islaamka!” – Cabdiraxmaan Cabdishakuur | Hadalsame Media
Home Maqaallada ”Waxaa soo baxay 3 qolo oo ka qayb qaata burburinta Diinta Islaamka!”...
”Waxaa soo baxay 3 qolo oo ka qayb qaata burburinta Diinta Islaamka!” – Cabdiraxmaan Cabdishakuur
(Hadalsame) 31 Agoosto 2019 – Maalmahan waxaa soo kordhaya dhallinyarada Soomaaliyeed ee diinta ka baxaya, kuna dhiirranaya in ay warbaahinta xiriirka bulshada si furan uga doodaan. Dhallinyarada caddeysanaysa waxay u badan yihiin kuwa qurbaha, waxaase jira dhallinyaro badan oo diinta ka shakisan oo gudaha dalka ku nool, laakiin sababo amni darteed aan caddeysan karin fikirkooda.
Raggii waaweynaa ee afkaarta Islaamiyiinta keenay waxay taageerayaashoodii u sheegeen in ay aqoonta casriga qaybteeda Sayniska iyo Tiknoolajiyadda qaataan, laakiin ay iska ilaaliyaan qaybta falsafada, fikirka iyo aqoonta aadanaha la xariirta. Dhallinyaradii ay fikirkaas ku abuureen markii ay u daaddageen falsafadii sayniska iyo Tiknoolajiyada ee ay Modernity ama Casriga, badwayn ayey ku dhexdhaceen, waxaana ka hor yimid su’aalo badan oo aan jawaab loo haynin oo maanwareer ku riday.
Waxay kaloo xaraakaadkii Islaamiga ku fashilmeen in ay u jawaabaan nolosha iyo xaalada murugsan ee dalka ka taagan, taasoo hanjab ku riday dhalinyaradii ay gacanta ku hayeen. Culimadiina intoodii badnayd waxay noqdeen maadiyiin aduun bursi ku jira. Waxay galeen ganacsi, NGOs iyo qaar maamulada iyo dawladahii dalka soo maray isku dhiibay. Waxaa gebi ahaanba meesha ka baxay afkaartii iyo mabaadi’dii qurxoonayd oo ay dhalinyarada u sheegi jireen.
Previous articleJUVENTUS VS SSC NAPOLI, AC MILAN VS BRESCIA: Shaxda & safafka ay kusoo geli karaan!
Next articleDAAWO: Dalka Japan oo Somalia ka caawinaya meel arrin ay BAAHI badan u qabto + Sawirro